Global Voices teny Malagasy · Fitantaran’olon-tsotra tamin’ny 2012 October 06
Tantara tamin'ny 06 Oktobra 2012
Fiarahan'ny Besinimaro Mametraka An-tSarintany Ao Venezoelà
Tsy maintsy hoe ho betsaka ihany ny olona no hisioka, hilaza vaovao farany amin'ny Facebook ary hamoaka lahatsoratra momba ny fifidianana filoham-pirenena any Venezoelà amin'ity faran'ny herinandro ity -ary maro ny hampiasa ny fitaovam-pampitam-baovao sosialy hitaterany iza fihetsika tsy mety na herisetra hitany. Misy Fandraisana an-tanana atao-na olom-pirenena vitsy hametraka...
Iran: “Avelao Any I Syria, Mba jereo Ny Aminay”
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana06 Oktobra 2012
Tsy nisy tranombarotra nivoha tany amin'ny Tsenaben'i Teheran ny Alakamisy 4 Oktobra 2012, andro iray taorian'ny nanaovan'ireo mpitàna tranom-barotra sy ireo mpivarotra fitokonana hanoheran'izy ireo ny fitotongan'ny sandam-bolam-pirenena tato ho ato ny Alarobia. Namoaka lahatsary maro mikasika ireo fitokonana tamin'ny Alarobia; ny fisian'ireo mpitandro filaminana tany amin'ireo faritry ny tsenabe,...
Ejypta: Ankizy Roa Notànana Ho Nanao Faniratsirana
Ankizy roa, sivy sy 10 taona, no notànana tao Ejypta, satria nolazaina fa nandrovitra avy amin'ny Kor'any ka nipisy tamin'izany. Tao an-tanàna ao Beni Souef, ao antampokavoana ao Ejypta, no niseho ny tantara, mpitondra fivavahana salafista no nametraka ny fitoriana ireo ankizy. Araka ny voalazan'ny fehezan-dalàna famaizana Ejypsiana, sokajiana ho heloka ny...
Eoropa Andrefana06 Oktobra 2012
Venezoelà: ‘Endrika sy Feo’-n'ny Andaniny Sy Ankilany Amin'ny Fifidianana
Namoaka rakitsary an-tserasera izay “manome feo ho an'ny andaniny sy ankilany mpanohana an'i [Hugo] Chávez sy i [Henrique Capriles]” ny mpaka sary Portiogey Eduardo Leal.” Ao amin'ny ‘Endrika sy Feon'ny Fifidianana Iray’ no pihan'i Eduardo ny eritreritra sy ny tsinapan'ny vahoaka Venezoelana araka izay hanazavan-dry zareo izay hofidiany mandritra ny fifidianana filoham-pirenena amin'ny...